आफतावकै भाइ डा. अख्तरले लगाइदिएका थिए घाइतेलाई बेहोस हुने इन्जेक्सन
२२ कात्तिक, काठमाण्डौं । १२ वर्ष अघि रौतहट राजपुर फरहदवा ४ स्थित शेख इद्रिसको टहरोमा भएको बम विस्फोटमा घाईते भएकाहरुलाई ईन्जेक्सन लगाई बेहोस बनाउने कार्यमा सांसद् मोहम्मद आलमका काकाका छोरा डा. समिम अख्तर संलग्न रहेको प्रहरी श्रोतले जनाएको शुक्रबारको नयाँपत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
अख्तर हाल रौतहटको गौरमा कांग्रेका पुराना नेता शेख इद्रिस खलिहानको नाममा ‘श्री शेख इद्रिस डाइग्नोस्टिक सेन्टर’ क्लिनिक सञ्चालन गरेर बसेका छन् ।
डा. अख्तरले पाकिस्तानबाट एमबिबिएस अध्ययन गरेका हुन् । तर, प्रहरीले इन्जेक्सन लगाई बेहोस बनाउने कार्यमा संलग्न अभियुक्तबारे भने अनुसन्धान अघि बढाएको छैन । इन्जेक्सन लगाउने कार्यमा संलग्नहरुको सम्बन्धमा सूचना प्राप्त नभएकोले अनुसन्धान अघि नबढाएको प्रहरीको भनाई छ ।
मृतक पिन्टु भनिने त्रिलोक प्रसाद सिंहका बाबु श्री नारायण सिंह राजपुतले विस्फोटमा आफ्ना छोरा घाईते भएको,तर पछि इन्जेक्सन लगाई बेहोस बनाएको बयान प्रहरी समक्ष दिएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को प्रतिवेदनमा सिंहले घाईते भएका पिन्टुलाई डा समिरले इन्जेक्सन लगाएर बेहोस बनाएको बताएका थिए । प्रतिवेदनमा उनले भनेका छन् ‘मलाई सानो घाउ छ । म घर जान सक्छु भन्थे, तर आफ्ताबको भाइ डा. समिरले इन्जेक्सनमा जहर हाली मेरो छोराको नशामा दिएको थाहा पाए । मेरो छोरो मर्ने अवस्थामा थिएन ।’